किर्तिपुरका मेयरले गरे अठाईसौं रक्तदान - Vishwa News
September 20, 2019 ० बिचार / प्रतिक्रिया
एउटा ब्यक्ति सामान्य रुपमा आयो । सर्वसाधारणकै लाईनमा बसेर सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरायो । स्वास्थकर्मीले अनुमति दिएपछि बेडमा पल्टियो र रक्तदानको लागि आफ्नो हात सुम्पियो । वरिपरीका व्यक्तिहरुले पछि रगत झिकिसक्दा पो थाहाँ पाए कि उहाँ त कीर्तिपुर नगरपालिकाकै मेयर हुनुहुँदो रहेछ । एक नर्सले कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरलाई उदृत गर्दै भनें; ‘कति सरल ! कति महान्’ !
आफ्नो भाई पर्ने स्व. विवेक डंगोलको पैँतालिसौं दिनको पुण्यतिथिमा पनि हँसिलो मुद्रामा, मेयर रमेश महर्जनको रक्तदान गर्दै गरेको फोटो फेसबुकमा भाइरल भयो । सामाजिक सञ्जालमा खासै आफ्नो आत्मप्रचार नगर्ने मेयरले फोटोको मुन्तिर लेखेका थिए—अठाइसौं रक्तदान । मेयरको यस कदमलाई सबैले तारिफ पनि गरे ।
भनाई नै छ; रक्तदान जीवनदान । गीतको सार जस्तो रक्तदान, त्यो महादान हो, जो जीवनदान हो । अहिलेसम्म अठाइसौ पटक रक्तदान गरिसकेका मेयर रमेश महर्जन कीर्तिपुरमा हुने प्रायःजसो रक्तदान कार्यक्रम छुटाउँदैनन् । कीर्तिपुरका मेयर रमेश महर्जन अहिले देशैभरि, रक्तदान गरेर आनन्द लिने अर्थात ‘रक्तदाता मेयर’को रुपमा चिनिन थालेका छन् ।
खरीपाटीमा सर्वसाधारणलाई आस्वस्त पार्दैछ सरकार